မဘသဖြစ်ဖြစ် မျိုးချစ် ဖြစ်ဖြစ် ပြည်သူ မလိုလားတာလည်း သိတယ်။ လုပ်နေတာက သွေးထိုး လှုံ့ဆော်နေတာလည်း သိတယ်။ အရေးယူလိုက်ရင် ဘုန်းကြီးတွေ၊ မျိုးချစ်တွေ ဆူပူ၊ တပ်က အာဏာ ပြန်သိမ်း ဆိုတာကြီး ကြောက်ပြီး လုပ်စရာရှိတာ မလုပ်ရင် ငွေညှစ်သမားလို ကြောက်မှန်း သိလေ တိုးယုတ်လေ ဖြစ်မှာပဲ။ အရေးယူ မကြည့်ပဲ (တစ်စက်မှတောင် စမ်းမကြည့်ပဲ) အသေကြီးလို ခံနေရင် ပိုသောင်းကျန်းလာမှာပဲ | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
Homeမဘသဖြစ်ဖြစ် မျိုးချစ် ဖြစ်ဖြစ် ပြည်သူ မလိုလားတာလည်း သိတယ်။ လုပ်နေတာက သွေးထိုး လှုံ့ဆော်နေတာလည်း သိတယ်။ အရေးယူလိုက်ရင် ဘုန်းကြီးတွေ၊ မျိုးချစ်တွေ ဆူပူ၊ တပ်က အာဏာ ပြန်သိမ်း ဆိုတာကြီး ကြောက်ပြီး လုပ်စရာရှိတာ မလုပ်ရင် ငွေညှစ်သမားလို ကြောက်မှန်း သိလေ တိုးယုတ်လေ ဖြစ်မှာပဲ။ အရေးယူ မကြည့်ပဲ (တစ်စက်မှတောင် စမ်းမကြည့်ပဲ) အသေကြီးလို ခံနေရင် ပိုသောင်းကျန်းလာမှာပဲ
၂- မဘသဖြစ်ဖြစ် မျိုးချစ် ဖြစ်ဖြစ် ပြည်သူ မလိုလားတာလည်း သိတယ်။ လုပ်နေတာက သွေးထိုး လှုံ့ဆော်နေတာလည်း သိတယ်။ အရေးယူလိုက်ရင် ဘုန်းကြီးတွေ၊ မျိုးချစ်တွေ ဆူပူ၊ တပ်က အာဏာ ပြန်သိမ်း ဆိုတာကြီး ကြောက်ပြီး လုပ်စရာရှိတာ မလုပ်ရင် ငွေညှစ်သမားလို ကြောက်မှန်း သိလေ တိုးယုတ်လေ ဖြစ်မှာပဲ။ အရေးယူ မကြည့်ပဲ (တစ်စက်မှတောင် စမ်းမကြည့်ပဲ) အသေကြီးလို ခံနေရင် ပိုသောင်းကျန်းလာမှာပဲ။
၃- အရေးကြီး ဝန်ကြီး ဌာန သုံးခု ကာချုပ်က ခန့်တယ်။ ကိုယ့်လက်အောက်မှာ မရှိဘူး မှန်းဆကြတယ်။ ကိုယ်တိုင်က ကိုယ့်လက်အောက်ကို ရောက်လာဖို့ တာဝန်ပေးကြည့်ဖူးလား။ ကလိန်ကကျစ် လုပ်ရင် ဖိထောင်းကြည့်ဖူးလား။ ဖိထောင်းလို့ မရရင် ပြည်သူကို ချပြပါ။ ပြည်သူနားပေါက်ရင် တနည်းနည်း ဆက်ဝန်းရံပေးလို့ရတယ်။ ကြိတ်ခံပြီး ကြိတ်ရှင်းမယ်ဆိုရင် တသက်လုံးမရ။
၄- အဂတိ ကင်းသော အစိုးရ ဖြစ်ရပါစေမယ် ဆိုပြီး တက်လာတယ်။ ဝန်ကြီးတွေ လာဘ်မစားဘူး။ မှန်တယ်။ ဝန်ကြီး လာဘ်မစားခြင်းဟာ ကျန်သူတွေ လာဘ်စားတာ တိုက်ဖျက်မှု မပါမချင်း အလကားပဲ။ ပြည်သူအပေါ် အဂတိဖိစီးမှု တစက်မှ လျော့သွားတာမဟုတ်။ ရောက်နေတဲ့ နေရာသည် ကိုယ့် ဌာန တခုလုံးပါ လာဘ်မစားအောင် တိုက်ပေးရမယ့်နေရာ။
၅- အစိုးရ ပြောင်းကာနီးမှာ ညွှန်ချုပ်အထက် ဒုဝန်ကြီးအောက် အမြဲတမ်း အတွင်းဝန်တွေ ထိုးထည့်သွားတယ်။ အဲဒါ သူတို့လူတွေ။ ဒါ သိပါရဲ့နဲ့ နေရာချင်း ချိန်းတာတောင် မလုပ်ပဲ ဒီအတိုင်း ဆက်ထားတယ်။ ကျားကို သတ်သတ်လွတ် စားနိုးစောင့်ချင်ရင် မြက်ချည်းသက်သက် ရှိတဲ့နေရာရှာလေ။ ကျားလက်ထဲမှာ ယုန်တွေ တပုံကြီး ရောက်နေတာကို ဒီကျားတွေ သတ်သတ်လွတ် စားနိုး စောင့်ရမယ့် အချိန်မဟုတ်။ မဖြုတ်မချင်း ဝန်ထမ်းတွေ ဆက်နာနေမှာ။
၆- စထွက်ကတည်းက တမှုန်တပိုင်းမှ လျော့မပေးခဲ့သူတွေနဲ့ ရင်ကြားစေ့ဖို့ အားထုတ်မိရင်လည်း ပြည်သူကို ပြောပါ။ ပြည်သူ့အားကို ယုံရင် ပြည်သူ့အားကို ယူပါ။ ပြည်သူနာမှာ စိုးလို့ ငါတို့ချည်း ခံမယ်ဆိုတာ အတိုက်အခံ ဘဝမှာပဲ မှန်မယ်။ အစိုးရ ဘဝမှာ အိုင်ဒီယာလွဲရင် ပြည်သူ တန်းနာတာပဲ။
← Wake up ! Thidagu Sayardaw! Stop acting like wooden ladle and listen to Buddha’s teaching
Myanmar Muslim elders request the Myanmar Buddhists in Malaysia to work together to prevent extremist terror attacks in both Myanmar and Malaysia →
2 thoughts on “မဘသဖြစ်ဖြစ် မျိုးချစ် ဖြစ်ဖြစ် ပြည်သူ မလိုလားတာလည်း သိတယ်။ လုပ်နေတာက သွေးထိုး လှုံ့ဆော်နေတာလည်း သိတယ်။ အရေးယူလိုက်ရင် ဘုန်းကြီးတွေ၊ မျိုးချစ်တွေ ဆူပူ၊ တပ်က အာဏာ ပြန်သိမ်း ဆိုတာကြီး ကြောက်ပြီး လုပ်စရာရှိတာ မလုပ်ရင် ငွေညှစ်သမားလို ကြောက်မှန်း သိလေ တိုးယုတ်လေ ဖြစ်မှာပဲ။ အရေးယူ မကြည့်ပဲ (တစ်စက်မှတောင် စမ်းမကြည့်ပဲ) အသေကြီးလို ခံနေရင် ပိုသောင်းကျန်းလာမှာပဲ”
Naythit NT with Nay Zaw and 8 others.
“မြင်းခွာတချက်ပေါက်ရင် . . .
ဒါက သခင်ဗဟိန်းရဲ့ သမိုင်းဝင် တိုက်ပွဲခေါ်တဲ့စကား. . . ။
မြင်းက စစ်ပုလိပ်တွေရဲ့ မြင်း
မြင်းနဲ့တိုက် နံပါတ်ဒုတ်နဲ့ ရိုက်ပြီး ဖြိုခွဲလို့
နယ်ချဲ့စစ်ပုလိပ်ရဲ့ မြင်းခွာ တချက်ပေါက်တာနဲ့ တိုင်းပြည်မှာ သပိတ်တိုက်ပွဲမီးတွေ ဟုန်းဟုန်းတောက်စေရမယ်လို့ ကိုလိုနီနယ်ချဲ့သမားကို စိန်ခေါ်တဲ့ တိုက်ပွဲခေါ်သံစစ်စစ်ပါ။
စစ်ဗြူရိုကရက်ယန္တရားရဲ့ လက်ပါးစေ မဘသဆိုတဲ့ မြင်းတွေဟာ တချိန်က နယ်ချဲ့စစ်ပုလိပ်မြင်းတွေနဲ့ တကယ်တော့ တန်းတူပါပဲ။ ဝီရသူဟာ ဒီနေရာမှာတော့ အမှန်ပြောလိုက်တယ်လို့ ဆိုချင်ပါတယ်။
ဝီရသူနဲ့ အပေါင်းပါတွေဖြစ်တဲ့ မဘသတွေဟာ စစ်အုပ်စုမွေးထားတဲ့ စစ်ခရိုနီတွေရဲ့ ခွစီးခံ ကျောကုန်းတွေဆိုတာ ဝန်ခံလိုက်ပါပြီ။
သူတို့လိုမြင်းတွေကြောင့် မီးဟုန်းဟုန်းလဲ တောက်ခဲ့ပါပြီ။
စတဲ့ မြို့ရွာတွေဟာ မဘသနဲ့ စစ်မြင်းတွေရဲ့ လက်ချက်နဲ့ မီးဟုန်းဟုန်း တောက်ခဲ့ပြီးပါပြီ။
ခိုင်းစေခံများဟာ တိုင်းပြည်နဲ့ လူထုအတွက် အဖျက်အမှောင့်သမားများ၊ စစ်အာဏာရှင်ရဲ့ ဒေါက်တိုင်အပိုင်းအစများ သာ ဖြစ်တယ်လို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်။
So…IF he revealed like that his superiors: Min Aung Hlaing, Shwe Mann, Home Minister and Than Shwe should be made to answer @ ICC.
Hla Win at Rangoon Tea House – ရန်ကုန်တီးဟောက်စ်.Follow
April 30 at 11:07pm · Yangon, Myanmar ·
“”””ဒါ နိုင်ငံကို မဆူဆူအောင်လုပ်နေတဲ့
hard liner တစုရဲ့ခေါက်ရိုးကြိုးလုပ်ရပ်ပါ
အဲ့ဒီတော့ ထစ်ခနဲဆို ကျွန်တော် တို့ကို
ဘဝမှာ အသက်ရှူတော့တချက်ချောင်တာပေါ့ “”!
ဝန်ကြီးသည် myanmar now အယ်ဒီတာကိုဆွေမင်းနှင့်မဘသမျိုးချစ်ကွန်ယက်၏ထိပ်တိုက်တိုးမှုတွင်မျိုးချစ်အမည်ခံအကြမ်းဖက်သမားအချို့၏ ခြိမ်းခြောက်မှုကို ခံထားရသူလည်းဖြစ်သည်